N'ogbe Glutaraldehyde Ngwọta Manufacturer na Supplier | Junyu Pharm
Glutaraldehyde Ngwọta Disinfection na ọgwụ antiseptik. Iji maka arịa disinfection.
Glutaraldehyde Ngwọta bụ usoro dị iche iche, na-arụ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa. Na uru nke imitative na ala corrosive,
ala toxicity na mma, kwụsie ike nke okenye ihe ngwọta, ọ maara dị ka ezigbo nwoke ịga ụlọ ọgwụ disinfectant
mgbe formaldehyde na ethylene oxide. Ọ nwere ezigbo mmetụta na nje bacteria na ahụ, spores, ungi.
Ọ nwekwara ike igbu nje gụnyere ịba ọcha n'anya Band virus na avian influenza nje.
Glutaraldehyde Solution Rubber, ngwaahịa plastik na ịwa ahụ bụ ihe na-enweghị ọgwụgwọ 2.0%
(na usoro nke glutaraldehyde).
N'ebe dị jụụ na ebe gbara ọchịchịrị, na-echebe site na ìhè anyanwụ, ghara iru ụmụaka
Anyị nwere otu ndị na-arụ ọrụ nke ọma iji zaa ajụjụ site n'aka ndị na-azụ ahịa. Ebumnuche anyị bụ "mmezu ahịa 100% site na ngwaahịa anyị dị elu, ọnụahịa ọnụahịa & ọrụ ndị ọrụ anyị" ma nwee ọmarịcha aha n'etiti ndị ahịa. Site na ụlọ ọrụ ole na ole, anyị ga-enye ọtụtụ ndepụta dị ọnụ ala maka Cheap Veterinary Drugs Oxytetracycline 5% Ọgwụ 50ml, Ugbu a, anyị nwere ihe anọ na-eduga. A na-ere ahịa anyị kachasị mma ọ bụghị naanị n'ime ahịa ndị China ugbu a, kamakwa ịnabata ya na ahịa ụwa.
Ndepụta ọnụ ala maka ntinye nke China, Oxytetracycline, Anyị na-agbasawanye ahịa mba ụwa anyị dabere na ihe ndị dị mma, ọrụ dị mma, ọnụahịa ezi uche na nnyefe oge. Biko kpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla maka ozi ndị ọzọ.
Na anyị na-eduga technology N'otu aka ahụ dị ka mmụọ anyị nke ọhụrụ, ibe imekọ ihe ọnụ, uru na mmepe, anyị na-aga na-ewu a ọgaranya ga-eme n'ọdịnihu ọnụ gị kpọrọ ihe enterprise maka Nnukwu nhọrọ maka China Veterinary Medicine Vitamin B12 Ọgwụ, comingnabata mmasị òtù na-erubere anyị isi , anyị na-ele anya n'ihu iji nweta ohere nke iso ndị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ gburugburu ụwa maka mmepe njikọta na nsonaazụ ibe.
Nnukwu Nhọrọ maka China Ọgwụ vitamin C, ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ, na-eche asọmpi ahịa ụwa zuru oke, anyị amalitela atụmatụ ụlọ eji eme ihe ma melite mmụọ nke "ọrụ mmadụ na ikwesị ntụkwasị obi", na ebumnuche iji nweta mmata ụwa na mmepe na-adigide.
Nke gara aga: Tylosin Tartrate Bolus 600mg
Osote: Ọgwụ Amoxicillin
2% glutaraldehyde ngwọta
Glutaraldehyde Ngwọta maka ugbo ọkụkọ